Baledeywne: Dabley hubeysan oo dilay oo saddex ruux oo isku qoys ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 7 March 2015 7 March 2015
Mareeg.com: Kooxo hubeysan ayaa xalay ku dishay guri ku yaalla xaafadda Howl-wadag ee magaalada Beledweyne nabadoon lagu magacaabi jiray Axmed Aadan Xassan [Axmed Siyaar] wiil 8 sanno jir ah oo uu dhalay iyo ruux ilaalo u ahaa oo la sheegay in uu adeer u ahaa.
Dableyda ayaa sidoo kale dhaawac u geystay xaaska nabadoonka iyo gabar uu dhalay, sidda uu xaqiijiyay guddoomiyaha degmada Beledweyne Max’ed Cismaan Cabdi Qalaafoow.
Kooxda hubeysan ayaa markii hore la sheegay iney rasaas huwiyeen guriga nabadoonka, kadibna ay gudaha u galeen, islamarkaana dileen nabadoonka iyo wiil yar oo uu dhalay, islamarkaana dhaawaceen labo dumar ah.
Dableyda ayaa guriga ka kaxeystay wiil uu nabadoonka la dilay adeer u ahaa, waxaana saaka meydkiisa oo madax laga jaray lagu arkay meel ka baxsan magaalada.